Instagram Fonts: Jenareta, Symbols, Emoji, Online Kopa Namatidza
Fonts nokuti Instagram
PaIndaneti uchawana zvakawanda fonts itsva kushandiswa muna Instagram. Pane zvakawanda vakasarudzwa fonts nokuda Instagram. Kunze mureza fonts, unogona vaunze chero yakanaka Fonts kuti Instagram nesarudzo yako. Chero zvinyorwa uye magwaro zvakasikwa pano anogona kukopwa uye akaiswa chero mudzinza renyu Instagram Profile, zvisinei kana Username rako kana chinzvimbo, Profile pomusoro unoti kana nyaya, mumhanyi kana mashoko. Kunze, fonts siyana anogona kushandiswa paIndaneti: akatarwa, vakashinga, tatsveyamisa kana Strikethrough.
Online Text jenareta
How kusika chakanaka Fonts
Kuti kushandisa chero Fonts anomirirwa paIndaneti kwako Instagram Profile, uchava kutaipa runodiwa rugwaro nzvimbo pahwindo chaiyo uye kusarudza chero Fonts iwe aifarira. Ipapo iwe uchagona kutevedzera chinyorwa mhando nemabhii akanaka kubva panzvimbo. Nokuda zano iri uchakwanisa kuwedzera fonts matsva Instagram wako uye inonanga kusika yenyu profile. Kushandisa yedu yepaIndaneti unogona kuchinja fonts muna Instagram zvose Profile unoti yenyu mbiru kana mashoko.
Munyika yanhasi uchada anokosha zviratidzo kuti mapikicha zvechokwadi nemamwe apo Blogging muna Instagram. Kunze-siyana acho, uchawana zvakawanda kwazvo richishanda zviratidzo nokuda Instagram. Somuenzaniso, kubva pano uchakwanisa kutevedzera gupa chiratidzo nokuda Instagram Username. Uchakwanisa kutevedzera chero zviratidzo nokuda Instagram kuti ungada kuwedzera renyu Profile kubva paIndaneti.
Kuti kuronga kugutsikana kwako apo Blogging muna Instagram unofanira kuziva kuti zviratidzo zvizhinji anogona kushandiswa apo yokunyora Instagram romukova, achizadza muzita kana Profile unoti. Saka, sei zviratidzo zvizhinji zvinoratidza kuva Instagram romukova vane?
Instagram ndiye social network mamwe mapikicha kupfuura magwaro; Naizvozvo, pambiru vhoriyamu iri shoma. The muganhu iri 2,200 zviratidzo por pambiru. Uye sei zviratidzo zvizhinji sei Profile unoti zvinosanganisira? Uchava kuti aenderane zvaida mashoko muna 150 zviratidzo kuti kuwedzera ruzivo rwako kuti Profile unoti. Zvakataurwa muna Instagram vane chiratidzo muganhu uyewo: hauzovipo kukwanisa kunyora mashoko mapfupi pane mbiri zviratidzo uye anopfuura 1,000 zviratidzo.
Unogonawo kusika emojis siyana nokuda Instagram paIndaneti. Unogona kuwedzera emojis zvakasikwa paIndaneti zvose Instagram mbiru uye nyaya.
Nzvimbo anewo kushanda rakasikwa kujairika Emoticons kuti Instagram. Unogona kuwana guru emoticon mubatanidzwa nokuda Profile tsananguro. Muenzaniso kuwedzera Emoticons kusvikira pambiru kana nyaya rakafanana imwe inoshandiswa magwaro uye emojis: kuti emoticon inofanira kuwedzerwa kubva paIndaneti uye pasted kupinda Instagram.
The operative Pfungwa paIndaneti hwakavakirwa kusikwa zvitaera siyana achishandisa akasiyana Unicode zviratidzo. Saka zvazviri yedu yepaIndaneti hakuiti kusika fonts, asi anosanganisa Unicode glyphs inowirirana Instagram. Chii Unicode Instagram?
makombiyuta zvose mashoko inochengeterwa mu binary pamanyorerwo (anofambidzana siyana Kwemagandanga Achishandisa Kombiyuta). Kunyange rugwaro rauri kuverenga anochengeterwa panguva Server sezvo Kwemagandanga Achishandisa Kombiyuta. Pakutanga kombiyuta yaitonga neimwe kambani aiva pachavo pfungwa dzavo pamusoro binary remitemo kushandiswa kuitira kuti tiratidze siyana rwezuva zviratidzo.
Munguva 1980s iri binary romutemo rakanga kwezvipimo nokuda Unicode. Unicode chinhu dzakawanda Standardization simba kushanda nokudenga Specification orugwaro zviratidzo.
Unicode asati azviratidza, programmer ose akashandisa nzira kuchengeta uye vanoita rugwaro yavo; Naizvozvo, nguva dzose apo zvirongwa zviviri vakasikwa programmers siyana yaitofanira, ari «mushanduri» kwaifanira akasikwa.
Nokuti kuti yezwi vakawanda mureza raiva kuoma uye kwete makambani ose vaida dzaifanoiswa kuti vabatane hurongwa chinyorwa chiratidzo Coding, Unicode aifanira kushandisa seti zviratidzo siyana kutsigira hurongwa, kusanganisira yechinyakare. Nokukurumidza nhamba zviratidzo yakawedzera pamwero exponential, uye pari zvino zviri mazana ezviuru. The Emoticons vari rwezuva zviratidzo pamwe; Naizvozvo, Emoticons zvose nekuratidzwa ose zuva kupfuura Unicode uyewo.
Yokutanga 128 Unicode zviratidzo ndivo ASCII zviratidzo izvo arufabheti Latin. Asi Unicode rine zvakawanda kupfuura 128 zviratidzo uye vazhinji vavo patakafanana vatambi Latin, asi vane misiyano maererano tsamba ushingi kana mapatani. zviratidzo izvi zvinogona kushandiswa pave «pseudoalphabets» chakatodzana vanhuwo ASCII chinyorwa asi tine vamwe kusiyana: kuva zvikuru noushingi, zvakanyorwa Italic, inverted kana dzakamakwa!
The «Font» izwi chaizvoizvo zvinoreva akaita Graphics zvakafanana siyana kana vamwe Unicode glyphs. Unofanira kunge akanzwa Comic Sans uye Arial, izvo fonts. Zvinhu vanowanika website yedu apo asika magwaro, emojis kana Emoticons, uyewo mashoko kuti iwe kutevedzera namatidza vachishandisa paIndaneti, zviri chaizvoizvo zviratidzo aripo mumwe Fonts. Naizvozvo, rugwaro akatsveyamiswa uye dzimwe sebvudzi tsamba kuti iwe kusika kurishandisa yenyu Instagram Profile Zvamazvirokwazvo vakaparadzana zviratidzo, kufanana tsamba A uye B Somuenzaniso.
Saka, nei muri anokosha fonts izvi paIndaneti inodiwa? Kana zvavo fonts vakanga raimiririra pano, iwe havaizokwanisa kutevedzera namatidza navo! Somuenzaniso, iwe havazombokwanisi kuti pinza mamwe mashoko Comic Sans muruoko rwako Instagram bio, nokuti zviratidzo iwe kutevedzera uchava misi ASCII zviratidzo uye uchava akaratidza panguva imwe nzvimbo sezvo pakutsvaga muridzi nzvimbo.
Zvisinei, apo kushandisa yakatarwa Unicode zviratidzo izvo Kutarira akafanana vamwe Fonts kana vari vamwe werudzii (vakashinga, tatsveyamisa, akatarwa kana inverted Somuenzaniso), tichakwanisa kushandisa magwaro akadai «Tevedzera» rakanaka Fonts ari Profile vakananga kana yenyu Instagram mbiru.